Dutchtown မှအကြမ်းဖက်မှုကိုကုသပေးခြင်း• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
အပေါ် Posted မေလ 27th, 2021
2019 ခုနှစ်တွင်စိန့်လူးဝစ္စမြို့သည်ဒတ်ခ်ျတောင်းကိုမြို့ရပ်ကွက်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည် ရောဂါပျောက်ကင်းအကြမ်းဖက်မှုတိုင်းပြည်အနှံ့အပြားရှိမြို့ကြီးများနှင့်ရပ်ကွက်များ၌အောင်မြင်ခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ချဉ်းကပ်နည်းအသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Dutchtown နေထိုင်သူများသည်အိမ်နီးချင်းများနှင့်အိမ်နီးချင်းများ၏အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်နေကြသည်။
ထိုမျှော်လင့်ချက်သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်မြို့တော်ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာနသည် Dutchtown သင့်လျော်သောနေရာနှင့် Mount Pleasant ရပ်ကွက်များရှိအပိုင်းများပါ ၀ င်သည့် Dutchtown မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းများကိုပြသသည့်စာရင်းဇယားများထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သေနတ်နှင့်ဆက်စပ်သောရာဇ ၀ တ်မှုများ - ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ချေမှုန်းရေး၊ လုယက်မှုနှင့်လူသတ်မှု - မြို့၏အခြားဒေသများသည်အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုများနှင့်ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရသောအချိန်တွင်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။
Dutchtown ရှိ Cure Violence အစီအစဉ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ထ။ စတင်ခဲ့ပြီးရလဒ်များမှာအထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနီးအနားရှိအကြမ်းဖက်ရာဇ ၀ တ်မှုများတွင်သိသိသာသာကျဆင်းမှုများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသော်လည်း Cure Violence အဖွဲ့သည်ရပ်ရွာ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်း Dutchtown အဖြစ်အပျက်ကိုသင်တက်ရောက်ခဲ့ပါကရပ်ကွက်လူတိုင်းအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ညဘက် Dutchtown လမ်းများပေါ်တွင်ထွက်နေသော Cure Violence အစီအစဉ်မန်နေဂျာများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုနှောက်ယှက်သူအချို့နှင့်သင်တွေ့ဆုံဖွယ်ရှိသည်။
ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြaddressesနာအဖြစ်ဖြေရှင်းသည့်ချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု၍ Cure Violence သည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသမည့်အစားရာဇ ၀ တ်မှု၏အကြောင်းရင်းများကိုဖြေရှင်းသည်။ မှ သူတို့ရဲ့ website:
အကြမ်းဖက်မှုသည်ကူးစက်တတ်သောပြlikeနာတစ်ခုကဲ့သို့ပြုမူသည်။ ၎င်းသည်ထိတွေ့ခြင်းမှကူးစက်သည်။ ကူးစက်တတ်သော ဦး နှောက်ယန္တရားများနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်ရရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ထိရောက်စွာကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Cure Violence သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ချီကာဂို၌စတင်ခဲ့သည်။ ဆရာဝန်၊ epidemiologist နှင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဌာန၏ဒါရိုက်တာ Dr. Gary Slutkin သည်အစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ တီဘီရောဂါ၊ ကာလဝမ်းရောဂါနှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်ကူးစက်ရောဂါများကိုနှိမ်နင်းရာတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်သူသည်အကြမ်းဖက်မှုကပ်ရောဂါကိုကိုင်တွယ်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အမေရိကနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိမြို့ကြီးများတွင် Cure Violence ချဉ်းကပ်မှုသည်အကြမ်းဖက်မှု ၄၀% မှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ကျဆင်းသွားစေသည်။
Cure Violence သည်အခြားကပ်ရောဂါများပါ ၀ င်သည့်အကြမ်းဖက်မှုကိုရပ်တန့်ရန်အဆင့်သုံးဆင့်ပါသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ အစီအစဉ်တွင်ကြားဖြတ်သူများ၊ အဝေးရောက်အလုပ်သမားများနှင့်အခြားသူများကိုသူတို့၏ချဉ်းကပ်မှုကိုပြဌာန်းထားပါသည်။
Cure Violence တွင်အလုပ်လုပ်သည် ကြားဖြတ် ထိုရပ်ရွာကိုလူသိများပြီးယုံကြည်ကြသည်။ ကြားဖြတ် ၀ င်ရောက်သူများသည်များသောအားဖြင့်ရပ်ကွက်မှလူများသည်“ လမ်းပေါ်တွင်ယုံကြည်မှု” ရှိသည်။ ကြားဖြတ်ပြောဆိုသူများသည်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်ရပ်ကွက်ရှိလူများနှင့်သိကျွမ်းရန်သူတို့၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်အကြမ်းဖက်ဖြစ်ပျက်မှုများကိုလက်တုံ့ပြန်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၊ ပtechniquesိပက္ခများကိုဖျန်ဖြေခြင်းနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်လျှော့ချရန်နှင့်အခြေအနေများအားပြန်လည်ရှင်သန်ရန်သေချာစေရန်လုပ်ဆောင်သည်။
အဝေးရောက်အလုပ်သမားများသည်အကြမ်းဖက်မှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်မှုမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖော်ထုတ်ပြီးချဉ်းကပ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစသည့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အလုပ်သမားများအနေဖြင့်ကူညီနိုင်သည်။ သူတို့သည်အကြမ်းဖက်မှု၏အကျိုးဆက်များကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ပconflictိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းအတွက်အခြားနည်းလမ်းများသင်ပေးခြင်းဖြင့်အပြုအမူများကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားသည်။
Cure Violence အဖွဲ့သည်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူများ၊ ခေါင်းဆောင်များ၊ နေထိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ ယုံကြည်ခြင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများမှရပ်ကွက်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်မှုအပေါ်တုန့်ပြန်မှုအားပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ရပ်ရွာလူထု၏ကန့်ကွက်မှုနှင့်ပြသနာများကိုပြသရန်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားမှုတိုင်းကိုတုံ့ပြန်ကြသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောလူမှုရေးစံနှုန်းများကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းနှင့်ရပ်ရွာလူထုသည်အကြမ်းဖက်မှုကိုသည်းမခံတော့ဟူသောသတင်းစကားကိုဖော်ပြရန်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတကွလုပ်ကိုင်ကြသည်။
စိန့်လူးဝစ္စ Aldermen ဘုတ်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Cure Violence ကိုရန်ပုံငွေများခွဲဝေချထားသည်။ Dutchtown၊ Wells-Goodfellow နှင့် North Side ရှိ Walnut Park ရပ်ကွက်များနှင့်အတူအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
မြို့သည်ဒေသခံအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောနေရာကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု Dutchtown ရပ်ကွက်ရှိ Cure Violence ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။ သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကထဲကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ Meramec အပေါ်။ ဤအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်အနီးအနားရှိ Employment Connection ရှိနေခြင်းကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအနေဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်လေ့ကျင့်မှုများကိုရရှိနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများပေးခဲ့သည်။ Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းဖြစ်ရပ်များတွင် Employment Connection သည်မကြာခဏလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည် Dutchtown နွေရာသီ Vibes နှင့် ရုပ်ရှင်ည, သင်သည် Cure Violence အဖွဲ့ကိုအိမ်နီးချင်းများနှင့်စကားပြောသောနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါး၏ထိပ်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းရလဒ်များသည်ယခုထိထင်ရှားနေပါသည်။ Cure Violence သည်ဒတ်ခ်ျတောင်းတွင်ပထမဆုံးခြောက်လအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအခြေအနေ ၈၀ ကျော်ပြတ်တောက်သွားသည်။ ထို့အပြင်အဖွဲ့သည်အန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ဖော်ထုတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးမရေမတွက်နိုင်သည့်ရပ်ရွာလူထုများနှင့်သက်ဆိုင်သူများနှင့်စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးရပ်ရွာတွင်းသို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုဖြေရှင်းရန်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေခြင်းအတွက်အလွန်အမင်းကျေးဇူးတင်မိပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပိုမိုတိုးတက်မှုနှင့်ပိုမိုလုံခြုံသောအိမ်နီးချင်းများကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အောက်မှာ Filed ရာဇဝတ်မှုနှင့်လုံခြုံမှု. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ရာဇဝတ်မှုနှင့်လုံခြုံမှု နှင့် ဒိန်းမတ်. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် မေလ 30th, 2021 .
ဒိန်းမတ် ရာဇဝတ်မှုနှင့်လုံခြုံမှု Dutchtown အတွက်အကြမ်းဖက်မှုကိုကုသပါ